Marohazo Info. About. What's This?
17.666670°S 44.333330°E ﻿ / -17.666670; 44.333330
Marohazo dia kaominina malagasy ao aminny distrikani Maintirano, Faritanini Mahajanga. Ny isam-poniny dia 4545 araka ny faminavinana natao taminny taona 2000. Ny kaodin-kaominina dia 42113 ary ny kaodin-distrika dia 421
Ny entana faharoa lafo vidy indrindra dia coco. Ny zava-bolena lehibe indrindra aminny lafinny velarantany dia vary. Ny entana fahatelo lafo vidy indrindra dia mangahazo. Ny isanomby dia 12304. Ny isanny taona nisiam-pesitry ny vorona teo anelanelanny taona 1999-2001 dia 3. Ny zava-bolena faharoa lehibe indrindra aminny lafinny velarantany dia mais. Ny entana lafo vidy indrindra dia vary. 40 ny mponina no miasa tany. 60 ny mponina no miasa aminny fiompiana.
Ny fitaovam-pitaterana ampiasaina matetika indrindra dia charrette. Ny faharetanny dia mankany aminny renivohi-paritany dia 60 ora. Ny fotoam-pitaterana mankany aminny tanàn-dehibem-paritany aminny andro fahavaratra dia 60 ora. Ny saran-dalanny olona tokana mankany aminny tanàn-dehibem-paritany aminny andro fahavaratra dia 325000 Fmg. Misy fikambananny mpampiasa lalan-tany ao. Ny saran-dalanny olona tokana mankany aminny tanàn-dehibem-paritany aminny haintany dia 325000 Fmg.
10 isan-jatonny mponina no tena mahantra dia mahantra. 10 isan-jatonny mponina no atao hoe mahantra. Ny halavanny vanim-potoana mety ahalanianny vokatry ny taon-dasa dia 5 volana. 30 isan-jatonny mponina no atao hoe manan-karena. 50 isan-jatonny mponina no manana fari-piainana antonontonony.
Misy masoivohonny ministeranny fiompiana. Misy masoivohonny ministeranny fiompiana. Misy masoivohonny ministeranny fahasalamana. Misy masoivohonny ministeranny fahasalamana. Misy masoivohonny ministeranny asa tany. Misy masoivohonny ministeranny asa tany. Misy masoivohonny ministeranny fanabeazana. Misy masoivohonny ministeranny fanabeazana.
Tapaka in-3 ny lalana tao anatinny taona 1999-2001. Ao aminny atao hoe faritra mena ilay kaominina. Ny isanny vakitrano tanatinny taona 1999-2001 dia 6.